China ODM na OEM silicone roba ngwaahịa rụpụta na Factory | Chengda
Anyị mepụtara na ODM, OEM a dịgasị iche iche nke silicone kwa ụbọchị n'ji silicone na roba onyinye ngwaahịa.
Dị ka: Silicone ekwentị ikpe, silicone ji egwuri egwu, silicone ejiji akpa, silicone brushes, silicone onyinye wdg Anyị nwekwara ike ime ka ngwaahịa dị ka ndị ahịa imewe, ịbịaru ma ọ bụ ọbụna a echiche. Anyị nwekwara ike inye mgbakọ, mbukota, nnyefe ọrụ. Anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka mee akara ha maka silicone roba kwa ụbọchị na ndị ahịa na ngwaahịa onyinye.
Anyị nwere ike ibipute logos ma ọ bụ aghụghọ na ngwaahịa silicone. Anyị nwere ike ịme akwụkwọ silk, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, nnyefe ntinye mmiri, mbipụta mbufe ọkụ, mbipụta 3D wdg. You nwere ike inye anyị faịlụ AI ma ọ bụ foto doro anya, anyị nwere ike ịhazi mbipụta maka gị. Anyị nwekwara ike ịgba.
Banyere nkwakọ ngwaahịa:
Anyị nwere ike ime mbukota mbukota dị ka ndị ahịa. Clear opp bag mbukota, acha akwụkwọ igbe mbukota, E Bipụtara ịkwanyere igbe mbukota wdg Ọ dị mma na ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ike inye Ai faịlụ maka ebi akwụkwọ mbukota.
1. Ngwa ahịa - Mbupu bụ ozugbo n'ime 12h
2. Mass / OEM iji - 10 gaa 20 ụbọchị
3. Iwu ODM - consultationchọ ndụmọdụ
Anyị na-atụ aro ka ị jụọ ahịa anyị gbasara ụgwọ mbupu mbu tupu ịtụ ahịa.
Na-adabere n'usoro iwu gị na ọnọdụ ngwaahịa anyị ma ọ bụ usoro nhazi.
Anyị ga-anwa ike anyị niile ịhazi usoro gị ozugbo anyị nwetara ụgwọ gị.
Obere obere: Site Express, DHL, UPS, FEDEX, EMS. Ọ dabere na ihe ị chọrọ.
Nnukwu iwu: Site n'oké osimiri ma ọ bụ Site n'ikuku
Anyị nwere ndị injinia Nwepụta ngwaahịa, anyị nwere ike ịnye 3D, ọrụ nhazi 2D dabere na echiche gị ma ọ bụ eserese, anyị nwere ike ịnye ọrụ nyocha 3D dabere na ụdị gị.
Anyị nwere onwe anyị CNC igwe, EDM igwe, osise igwe, -egwe ọka igwe wdg Anyị nwere ebu imewe teem, nwere onwe anyị na-akpụzi ikike
Anyị nwere onwe anyị silicone echepụta igwe, nwere ngwaahịa echepụta ikike anyị onwe anyị, na-eme ka ngwaahịa dị ka gị arịrịọ na nke kacha mma mma na ngwa ngwa ụzọ oge.
Anyị nwere mgbakọ akara, anyị nwere ike inye ọrụ mgbakọ maka ndị ahịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị nwere usoro nlezianya dị mma na usoro nyocha ngwaahịa.
Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ nchịkọta maka ndị ahịa anyị. The ahịa nwere ike inye mbukota na-anapụta anyị factory. Ọzọkwa anyị nwere ike ịtụ mbukota si anyị mbukota soplaya.
Nke gara aga: Omenala Silicone ma obu Rubber Ngwaahịa maka Ngwa eletriki ma obu Electronic
Osote: Akụkụ silicone maka nfuli ikuku na nfuli mmiri
Medical Silicone Ngwa Ngwa
Omenala Anti Vibration onwe nyagide silicone ru ...
Aka uwe mkpuchi Silicone